သင်ယူရရှိသောသင်ခန်းစာများ - ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများ၊ Martech Zone
အချက်အလက်လုံခြုံမှုအတွက်အဖြေတစ်ခုအဖြစ် blockchain စတင်ခြင်းသည်ကြိုဆိုရမည့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများသည်လူတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုအလွဲသုံးစားရန်သူတို့၏နေရာအနှံ့ရောက်ရှိနေခြင်းကိုမြှင့်တင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကြီးအကျယ်လူထုဆန္ဒပြမှုများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပဲ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်သည်အလွန်အမင်းမီးလောင်သောကြောင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်အသုံးပြုသူ ၁ သန်း၏အလွဲသုံးစားမှုအတွက်ဖြစ်သည်။ Mark Zuckerberg ဦး ဆောင်သောလူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးသည်နိုင်ငံရေးအရထင်မြင်ချက်များကို polarize ပြုလုပ်ရန်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းအလှူငွေများအတွက်နိုင်ငံရေးကြော်ငြာများကိုပစ်မှတ်ထားရန်အတွက်လူပေါင်း (၈၇) သန်း၏အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းဖြင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Cambridge Analytica (CA) အရှုပ်တော်ပုံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့သောအကျင့်ဆိုးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် blockchain အခြေခံလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းရှိမှသာလျှင်။ ဘဝကအများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
Facebook-Cambridge Analytica Imbroglio ရှင်းပြသည်ရင်းမြစ် - Vox.com
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် CA သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဒေါသနှင့်ဝေဖန်မှုများဖြစ်စေခဲ့သည် ဆောင်းပါး မေလ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင် Vox တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ပိုများသနည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာ Cambridge Analytica တစ်ခုထက်ပိုပြီးအရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.
... ဒီအချက်က Facebook ကိုသူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ဘယ်လောက်အထိယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ငြင်းခုံမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားတယ်။ အချက်အလက်စုဆောင်းရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် application တစ်ခုကိုအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး တီထွင်ရန် Facebook ကခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပြီးတော့ developer ကဒီ app ကိုသုံးတဲ့လူတွေသာမကသူတို့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတစ်ခုကိုအသုံးချနိုင်ခဲ့သည်
ဒီမရေရာတဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ။ blockchain-based authentication system ။ ကာလ။
များသောအားဖြင့် blockchain နည်းပညာကို Bitcoin နှင့်ချိတ်ဆက်လိုသောသဘောရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်မြေစာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ငွေပေးချေမှုများနှင့်အတူ blockchain သည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အချက်အလက်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အထောက်အထားကာကွယ်မှုကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်လုံလောက်သောအလားအလာရှိသည်။
ယခုတွင်သင်သည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်ကပေါ်ပေါက်လာသောနည်းပညာအသစ်များသည်ဤကဏ္allများကိုမည်သို့ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်ကိုသင်စဉ်းစားရပေမည်။
ကောင်းပြီ၊ ပိတ်ဆို့ တစ် ဦး blockchain အပေါ်အချက်အလက်များ၏ hashing algorithms မှတဆင့် cryptographically လုံခြုံသည်။ အချက်အလက်များကိုကွန်ပျူတာထဲသို့ကွန်ယက်တစ်ခုမှ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ hack သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောကွန်ယက်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊
Blockchain မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ရင်းမြစ် - msg- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
ထိုကွောငျ့, authentication ကိုများအတွက် blockchain သုံးပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပြည့်စုံသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဟာရိုးရာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက် (PII) သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်သုံးလို့ပဲ။ ဤဗဟိုအချက်အချာကျသောအခြေခံအဆောက်အအုံသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးအားသာချက်များကိုပေးစွမ်းသည်၊ သို့သော်ဟက်ကာများအတွက်ကြီးမားသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးပြုသူအကောင့် ၅၃၃,၀၀၀,၀၀၀.
Blockchain သည်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစနစ်တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသန်းရာနှင့်ချီသောလူများကိုအောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်လုပ်နိုင်သည်။ Public key cryptography ပါ ၀ င်ခြင်းကအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၎င်းသည်လူအများအား application များကိုအမည်ဝှက်ဖြင့် အသုံးပြု၍ သိသိသာသာဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာများကိုမထားဘဲခွင့်ပြုသည်။
Distributed ledger technology (DLT) သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ လျှောက်လွှာစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်နှင့်ခွင့်ပြုထားသောသူသာသူ / သူမ၏အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ရန်သေချာစေသည်။
blockchain-based လူမှုကွန်ယက်သည်သင့်အချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် cryptographic keys ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့်အားစွမ်းအားပေးပါလိမ့်မည်။
Blockchain မွေးစားခြင်းသည်အရေးပါသောအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ဒီနည်းပညာဟာအထိခိုက်မခံတဲ့ဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ဟာသူအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းရန်စိတ်ကူးသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ လူများသည် blockchain ကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်နိုင်သေးဘဲနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗန်းစကား၊ ရှုပ်ထွေးသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များ၊
ရရှိနိုင်သော Access Point အများစုသည် ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်အတားအဆီးရှိသည်။ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် blockchain နေရာသည်သာမန်လူများနားမလည်သောနည်းပညာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဂေဟစနစ်သည်အလွဲသုံးစားမှုများနှင့်ကော်ဇောဆွဲခြင်းများကို (DeFi ဝေါဟာရတွင်ခေါ်ဆိုသည်) အားမြှင့်တင်ခြင်းအတွက်အနaတရာယ်ရှိသည်။
ဒါက blockchain စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တိုးတက်မှုကိုတားဆီးခဲ့သည်။ Satoshi Nakamoto သည်ကမ္ဘာကြီးကိုပထမဆုံးထိန်းချုပ်ရန်ပထမဆုံးကမ္ဘာကြီးစတင်မိတ်ဆက်ပြီးကတည်းက ၁၂ နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည်ပင်မစွမ်းရည်ရှိသော်လည်း DLT သည်လုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုကိုမတွေ့ရသေးပါ။
သို့သော်အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများ (dApps) ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်နှင့်၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမီမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေမည့်ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် blockchain မွေးစားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှာ AIKON ဖြစ်ပြီး blockchain အသုံးပြုမှုကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းမှုဟုခေါ်ပြီးရိုးရှင်းစေသည် ORE ID နံပါတ်.
လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှတဆင့် blockchain ကိုအပြုသဘောဆောင်သောပေါင်းစည်းမှုကိုဖြစ်စေရန် AIKON မှအဖွဲ့သည် ORE ID ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ လူများသည် blockchain ဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြုခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏လူမှုရေးဆိုင်ရာ logins များ (Facebook, Twitter, Google, စသည်ဖြင့်) ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်းများတောင်မှ၎င်းတို့၏ (ဖောက်သည်များ) ၏ဗဟိုမှခွဲထုတ်ထားသောအထောက်အထားများကို၎င်းတို့၏လက်ရှိဆိုရှယ်မီဒီယာ logins များနှင့်အလွယ်တကူဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို blockchain ဂေဟစနစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
နောက်ကွယ်တွင်ရှိသောအယူအဆမှာ blockchain applications များသို့ဝင်ရောက်ရာတွင်ရှုပ်ထွေးမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ AIKON ၏ ORE ID ဖြေရှင်းချက်သည်ယုတ္တိရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးလူမှုရေး logins များမှတစ်ဆင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သောရိုးရာအပလီကေးရှင်းများကိုကျင့်သုံးသည်။
လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူဘဲရှုပ်ထွေးသော blockchain app အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်များသည် blockchain နည်းပညာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေးစားခြင်းကိုမကြုံတွေ့ရအောင်တားဆီးပေးသည့်အထင်ရှားဆုံးအတားအဆီးများဖြစ်သည်။ နည်းပညာအရအသံမကောင်းသူများသည် blockchain အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ရှေ့ဆက်သွားရန်လုံလောက်သောလှုံ့ဆော်မှုမခံရဟုခံစားရသည်။
blockchain နှင့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများကို (အလိုလိုသိသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်) ပေါင်းစည်းမှုသည် DLT bandwagon ပေါ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအားသူတို့၏နည်းပညာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်ခံလာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လူများသည်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်၊ ဖုန်း၊ လူမှုရေး login များဖြင့် logging လုပ်ရုံဖြင့် blockchain ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ အခြေခံကျသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်နည်းပညာများ၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်တော်အစုလိုက်အပြုံလိုက် blockchain ကလေးမွေးစားခြင်းအောင်မြင်လိုလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: အိုက်ကွန်းalvin changစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းBitcoinblockchainblockchain authentication ကိုကင်းဘရစ် Analyticaအတည်ပြုခြင်းဒေတာ privacy ကိုFacebook ကmark Zuckerbergကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ msgသတ္တုရိုင်းအိုင်ဒီp2pအဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှုprivacy ကိုလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာ privacyစိစစ်အတည်ပြု
ကြှနျုပျတို့မှာ AIKON။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောအနာဂတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ အရာအားလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်အသုံးပြုမည့်အရာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းကိုအလယ်အလတ် ၀ န်ထမ်းများမရှိဘဲပိုမိုလုံခြုံစွာ၊ လွယ်ကူစွာနှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အမှတ်အသားပြုသည်။ သုံးစွဲသူများအားအီးမေးလ်၊ ဖုန်း၊ လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များဖြင့် blockchain applications များဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင် blockchain authentication system တစ်ခုဖြစ်သော ORE ID ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။